Lloret de Mar bekulokhu kubhekwa njengendlela inhlokodolobha izivakashi we-Spanish Costa Brava. Kulesi idolobha elingasolwandle labantu unyaka ngamunye edonsela amashumi ezinkulungwane izivakashi ezivela emazweni ahlukahlukene, kuhlanganise naseRussia. Njengoba ingxenye enkulu yomsebenzi izivakashi yiyona intsha, ukhangwa eziningi ebusuku amaqembu, ema-disco nemishayo. Kodwa futhi ingatholakala lapha, futhi izivakashi umndeni nezingane, kanye abahambi omdala lobudala. Uma ufuna iholidi kule ndawo yeholide futhi babefuna kukho isabelomali ukuze uhlale, cabanga ke ka Juan San Ipaki ke Ihhotela 2 *.
Ihhotela ukhululekile "San Juan Park" itholakala cishe maphakathi nedolobha resort of Lloret de Mar ogwini Spanish. Ibanga Girona ingamakhilomitha angu-40, kuyilapho port emoyeni, etholakala eduze komuzi, 23 km. Ngakho, lapho efika Girona sezindiza endleleni eya ihhotela kuzothatha Ningabizi lutho ngaphezu kwesigamu sehora. Ezinye izivakashi futhi uhlale lapha kusukela emoyeni Barcelona itheku. ibanga layo imayelana 70 km. Ngaphambi ezitaladini eyinhloko Lloret de Mar ngemishiza, izindawo zokudla, imigoqo kanye nezinye ukuzijabulisa engafinyelelwa kusukela ehhotela imizuzu nje eyishumi. At elifanayo kukhona ihhotela esiseduzane ebhishi.
San Juan Park Hotel 2 * (Spain) sekuqalile umsebenzi walo emashumini ambalwa eminyaka edlule, ngo-1970. I last emikhulu yokwakha kabusha labetibambile lapha ngo-2000. Zonke yokuhlala impahla Isikhwama, ehlanganisa amakamelo 75, etholakala esakhiweni emihlanu-storey, nge ikheshi. Ngaphezu amakamelo, yokudlela kanye ibha, kukhona ichibi Simi ophahleni sibheke omangalisayo esikuyo. Amakamelo nazi ejwayelekile. Basuke ahlotshiswe isitayela elula kodwa emnandi. Sinenkosi konke okudingayo: nekamelo lokugezela yangasese, i-TV, efrijini kanye kuvulandi. Leli hhotela ngokulinganayo kuhambisana kahle kokubili abantu abasha uhlale futhi izivakashi eza usulele imindeni yabo yonke nezingane futhi kubantu asebekhulile.
Izindleko yokuhlala e San Juan Park Hotel 2 *, ngokuvumelana iningi izivakashi abaye bavakashela lapha, siyafana star hotel yokuhlala kanye izinga lenkonzo. Ngokwesibonelo, ukuhlala wezinsuku eziyisikhombisa kule ehhotela ukuphakama ehlobo kuyokulahlekisela phakathi $ 365 euro ekamelweni elilodwa, kusukela 580 euro endlini ephindwe kabili esuka 826 euro ikamelo kathathu, futhi kusukela 1073 ngama-euro indawo ezine.
San Juan Park Hotel 2 * (Spain): Izibuyekezo lezihambi ezivela eRussia
Njengoba izivakashi zanamuhla lapho ukhetha izindawo ukubekwa kwelinye izwe noma omunye waqondisa hhayi kakhulu incazelo ehhotela, kodwa okuvelayo abantu aye ahlala kulo kubo, sanquma kancane adambise umsebenzi wakho futhi sikunikeze amazwana generalized baseRussia abangamaphesenti kulo nyaka waba ukuphumula "San Juan Park." A bit ngakho bagijima bafika kuqala, siphawula ukuthi iningi lezihambi nokukhetha zabo bajabula kakhulu. Ngokombono wabo, lokhu ehhotela hhayi kuphela ophila esigabeni sayo ezimbili inkanyezi, kodwa futhi asebenzisa zonke izinkanyezi ezintathu. Ngamafuphi, uma ubheka ehhotela isabelomali kwalowo muzi ngokungquzula athuthukile izivakashi ingqalasizinda ogwini iSpanishi, kukho okuhle kungaba San Juan Park Hotel 2 *.
Izibuyekezo mayelana ehhotela namakamelo awo angaphakathi
Ngokusho bakithi amakamelo kule ehhotela akuzona olukhulu kangaka, kodwa indawo ngempela ngokwanele. Basuke ahlotshiswe isitayela emnandi. Izindlu zangasese akuzona ivulekile kakhulu, kodwa ukhululekile kakhulu. Bafaka ikhethini eshaweni, namabhati egcwele. Kukhona dryer izinwele. Izinkinga amanzi ashisayo, ngokuvumelana izakhamizi, kuye kwaphawulwa. Nefenisha nezinto zikagesi emakamelweni ayimisha, kodwa isimo esihle sokusebenza. Kwezinye lamakamelo (ikakhulukazi Esitezi) kukhona Wi-Fi. Uma ekamelweni lakho akusebenzi intanethi, bese ukuxhuma kuyo, ungahlala endaweni yokwamukela izivakashi yehhotela.
Ukuhlanza "San Juan Park" amakamelo uphiwa nsuku zonke. Ikhwalithi wokuhlanza ngokuvamile, zonke izimenywa babejabule. Nokho, ngokuvumelana kubo, insipho egumbini lokugezela nezincekukazi ngezinye izikhathi sikhohlwe ukwengeza. Njengoba abavakashi ebona aveze ukuthi uma ufuna amathawula yakho ishintshile, kufanele uyiphonse phansi. Kungenjalo, incekukazi ecabanga ukuthi akadingi esikhundleni.
Okuvelayo zezivakashi ku indawo ehhotela kanye itshelekwe
Njengoba indawo, iSan Juan Park Hotel 2 * itholakala endaweni enokuthula eduze izakhiwo zokuhlala. Lena a plus elikhulu, ngoba lapha ekuphumuleni kwakho ebusuku ngeke siphazamise umsindo disco. Eduze kukhona nezitolo ezinkulu, zokudla, izitolo okudayisa kanye neziningi ezinye izakhiwo izivakashi. Esikhathini okuwuhambo lwemizuzu engu-ayisikhombisa kusukela esiteshini ibhasi, kusuka lapho ungakwazi ukufinyelela Blanes aseduze noma Barcelona nakwamanye amadolobha Spanish. Ngaphezu kwalokho, lapha bakhonza ibhasi khulula epaki amanzi go-karting. Ngokusho abahlali, njengoba uhambo kusukela ehhotela kuze kufike elwandle kanye enkabeni yedolobha e imizuzu nje eyishumi.
Ezikhona zezivakashi ehhotela wehlukile kakhulu. Ngakho, ungakwazi ukuhlangabezana nemindeni nezingane zabo bonke ubudala kanye intsha kanye nabahola impesheni. Izivakashi eziningi ukuhlala lapha abavela eMpumalanga Yurophu. bakithi kanye nezakhamuzi kwamanye amazwe ayengaphansi kweSoviet Union alikho ngempela njengoba emahhotela, isibonelo, Turkey noma Montenegro.
Umbono abahambi ngokudla kanye Abasebenzi
Kepha ukudla e San Juan Park Hotel 2 * (Costa Brava, Spain), izinga jikelele izivakashi zayo wanelisekile. Ngakho, sasekuseni nazi ejwayelekile amahhotela yaseYurophu. Ekuseni, yokudlela linikeza izinhlobo eziningana ushizi namasoseji, okusanhlamvu, ubhontshisi, amaqanda, izithelo, Muffin kanye croissants, ujamu, ikhofi, itiye nobisi. ukudla kwasemini kanye dinner imenyu kuyinto ihlukahluke: isobho, izitsha eziningana eziyinhloko, amasaladi, nama-dessert. By the way, eyodla for dessert ngokuvamile ukunikela ice cream. Ngelilodwa nje, akekho umuntu uyolamba lapha. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukubuza ukudla kwasemini-ebhokisini, uma uhlela uhambo ekuseni. Ngaphezu kwalokho, uma ngasizathu simbe, weqa ukudla kwakusihlwa, futhi ezikhokhelwayo ibhodi isigamu ke ngosuku olulandelayo ungakwazi okunye esikhundleni sako, kokuba sisadla esitolo yokudlela.
Impression laseSan Juan Park Hotel 2 * abasebenzi njengoba iningi izivakashi wawumuhle. Ngakho, ngokuvumelana kubo, lapho kufika abaqondisi njalo uzama ngokushesha ugcwalise wonke amaphepha anisekele ekamelweni ngokushesha ngangokunokwenzeka. Zonke abasebenzi balapha banobungane, wamukele futhi ohlale ezimisele ukusiza. Nokho, lapha ngesiRashiya akekho ukhuluma, kodwa ungakwazi njalo kulula ukuchaza, kancane ukukhumbula yoke ikharikhyulamu ngesiNgisi. Futhi uma ukwazi kancane iSpanishi, liyoba izivakashi wamukelekile kakhulu "San Juan Park."
Umbono ezakhamizi zethu nabo kwi ukuzilibazisa lolwandle nokuzijabulisa
ukuzijabulisa Special ihhotela linikeza izivakashi zayo. Nokho, ophahleni ehhotela has ichibi elincane nge emphemeni ilanga. izivakashi eziningi ukuchitha isikhathi lapha, ikakhulukazi njengoba inikeza umbono nice ezizungeze. Empeleni abantu beze lapha iholidi beach, kanye kuyiwe ebusuku amaqembu, imigoqo kanye ema-disco, futhi ekuvakasheleni ezindaweni ezithakazelisayo. Kusukela maphakathi edolobheni nje lemizuzu eziyishumi kusukela San Juan Park Hotel 2 * (Costa Brava), konke ukuzijabulisa kuzodingeka okubizwa isandla. Eliseduze lolwandle kamasipala kungabuye ufinyelelwe kwamaminithi ambalwa, ijubane unhurried.
Izidakamizwa "Iberogast": yokusetshenziswa, incazelo, izibuyekezo Odokotela
Inyama in the ebhodweni nge amakhowe